जेठो सन्तान अन्यभन्दा धेरै फूर्तिलो र बौद्धिक किन ? – rastriyakhabar.com
तपाईँ परिवारको जेठो सदस्य हो ? हालै सार्वजनिक अध्ययनलाई विश्वास गर्ने हो भने जेठो सन्तान हुनुका धेरै फाइदा छन् । सो अध्ययन अनुसार परिवारको सबैभन्दा जेठो सन्तान अन्य भन्दा धेरै फूर्तिलो र बौद्धिक हुन्छ । जर्मनस्थित लिपजिग युनिर्भ्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुको एक समूहका अनुसार पहिलो बच्चा पछि जन्मिने हरेक सन्तान (बच्चा) पहिलोको तुलनामा कम बौद्धिक र फूर्तिलो हुन्छ।